Roobabkii ka da’ay Goballada Puntland dhowrkii maalmood oo ugu dambeysay ilaa iyo xalay [27 Oct. 2012] ayaa geystay khasaaro isugu jira naf iyo maal intaba, sida: • Degmada Qandala: Dhimasho 2-qof (wiil iyo gabar); 3- Saxiimadood iyo 2-Laash oo burburay; waxaa nafwaayay 2,098-neef oo Ari ah, 63-neef oo Geel ah, iyo 70-Dameero ah; waxaa burburay 116-Guri oo 4-guri oo ka mid ah ay leedahay Dowladda...
Wargayska Washington Post ayaa wax ka qoray dhaq dhaqaaqayada Ciidamada Maraykanklu ay ka wadaan Saldhigga Milatery ee Maraykanku ku leeyahay Dalka Jamhuuriyadda Jabuuti. Dhaq Dhaqaaqan ayuu Wargaysku ku sheegay mid Ciidamada Maraykanku ay ku sii laba jabbaarayaan la Dagaalank waxa loo yaqaano Argagixisada Geeska Afrika iyo Dalka Yaman. Diyaaradaha drones ka loo yaqaano ee aysan cidi wadin ayaa la...
‘ Anagoo markii hore aan ahayn Qoysas Noloshooda la la Daala dhacaya ayaa waxaa waqti Habeen ah oo aan ku suganahay Guryaheennii nagu Dul Habsadey Ciidamo ka tirsan kuwa Amisom gaar haaan kuwa Burundi kuwaas aan wax Ogeysiin ah na siinin” sidaa waxaa yiri Caaqil Caabdi Tahliil Dhoore oo ay soo Wakiisheen Qoysaskii ay ay Guryahooda ka Barakiciyeen Ciidamada Amisom ee ku yaaley Deegaanka Km 13 ee...
Col Maxamed Xuseen Muun-Gaab oo sheegey in Dhibaatada loo geysanyo Shacabka ay ku timid Dayacaad Laamaha Amaanka Xaaladda Gabar yar oo 14 jir ah oo Habeen dhaweyd Rag ku lebisan Direyska Ciidamada Dawladda ay ku Kufsadeen Degmada Yaaqshiid ee Magaalada Muqdisho ayaa iminka laga deyrinaya. Gabadhan Miskiinta ah oo iminka ku sugan Isbitaalka Banaadir ee Magaalada Muqdisho ayaa waxaa soo food saaray...